Young Learner Special English Course Level –2(Elementary 2) | LAPG
Young Learner Special English Course Level -2(Elementary 2)
Level -2(Elementary 2)
Day - တနင်္လာနှင့် ဗုဒ္ဓဟူး
Time - 5:00 - 7:00 PM
Nay Pyi Taw, Myanmar. View map
“Oxford university သင်ရိုးနဲ့သင့် English စာ စွမ်းရည်ကိုအခုပဲမြှင့်တင်လိုက်ပါ”
L.A Professional Group ရဲ့ Communicative English Courses (CEC) တွေကို August လ အတွက် အတန်းသစ်များဖွင့်လိုက်ပါပြီ။
Scholarship လျှောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေလား၊ IELTS အတန်းတွေတက်ဖို့အခြေခံ လိုနေတာလား၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိလား၊ ဒါတွေအတွက်လိုအပ်မယ့် English စွမ်းရည်တွေကို CEC အတန်းတွေကနေပြင်ဆင်ပေးသွားမှာပါ။
CEC အတန်းများမှာ ကျောင်းသားများအတွက် –
– Oxford University သင်ရိုးများ။
– ကျောင်းသားများ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက် သင့်လျော်တဲ့ Level များ။
– ခေတ်နဲ့အညီ ပြင်ဆင်ထားသော သင်ခန်းစာများ။
– Critical Thinking နဲ့အထွေထွေဗဟုသုတများ။
– လက်တွေ့ ချက်ချင်း ပြန်လည်အသုံးချနိုင်သော သင်ခန်းစာများ။
– တစ်ဦးချင်းစီကိုသေချာ ဂရုတစိုက်သင်ကြားပေးနိုင်သော လူဦးရေ ကန့်သတ်ထားတဲ့ သင်တန်းများ။
-ဆရာ/မ များနဲ့ တိုက်ရိုက်သင်ကြားနိုင်မယ့် Zoom Video Conferencing။
– Listening skills နှင့် pronunciation များအတွက် native speaker များရဲ့အသံဖိုင်များ ဖြင့် ထိထိရောက်ရောက် သင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မိမိအားလပ်တဲ့ အချိန်/နေရာမရွေး ဖုန်း၊ အင်တာနက်ရှိရုံနဲ့ အလွယ်တကူ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်မှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို လက်တွေ့ကျကျ အသုံးပြုတတ်မြောက်လိုသူများနှင့် စနစ်တကျ တတ်မြောက်လိုသူများ အတွက် သင်တန်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်မှာ IELTS ဖြေမယ့်သူများရော/ လုပ်ငန်း ခွင်ဝင်မယ့်သူများအတွက်ပါအသုံးဝင်မည့် သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ် skill တွေကို တိုးတက်လာအောင် လေ့ကျင့်ပေးသွားမှာလဲ။
1.4skills (Speaking, Reading, Writing & Listening)
2. Critical Thinking Skill
3. Study skill
5. Grammar & Vocabulary exercise
စတဲ့ skills တွေကိုနည်းစနစ်မှန်မှန်နဲ့သင်ယူလေ့ကျင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Oxford University မှသင်ရိုး၊ Curriculum and Syllabus များ ကိုသင်ကြားမည့် အပြင် လိုအပ်တဲ့သင်ခန်းစာများကိုလည်း အခြားနိုင်ငံတကာ အဆင့်မီသင်ရိုးများမှ ကောက်နုတ်ပြီး ထပ်လောင်းဖြည့်စွက်ထည့်သွင်းသင်ကြားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့အသုံးချနိုင်မယ့်သင်ခန်းစာများ၊ သင်ကြားမှုပုံစံများနဲ့သင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာကျောင်းသားများ နဲ့ သင့်တော်မည့် Level ၆ ခု ခွဲခြားထားပါတယ်။ ယခုလအတွက် တက်ရောက်နိုင်မယ့်အတန်းများကိုတော့ အောက်မှာ‌ဖော်ပြထားပါတယ်။
1. Level 1 (Elementary I)
2. Level2(Elementary II)
3. Level3(Pre-intermediate I)
4. Level4(Pre-intermediate II)
4. Level5(Intermediate I)
ဆရာတွေကတော့ International Qualifications များရရှိထားပြီး သင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံ ၁၀ နှစ်နဲ့အထက်ရှိသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များ မှာတက်ရောက်နေသောထူးချွန်ကျောင်းသားများအပြင် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောသူများကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့သည့်အတွေအကြုံပြည့်ဝသည့်ဆရာ/မ များဖြစ်ပါတယ်။
မိမိနဲ့ကိုက်ညီမယ့် level ကိုသိဖို့အတွက် သင်တန်းတက်မယ်ဆိုရင် online ကနေ placement test အရင်ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (level 1 ကစတက်မယ့်သူဆိုရင်တော့ ဖြေစရာမလိုပါ)
Placement test ဖြေဆိုကြေး – ၃ ထောင်ကျပ်
Level တခုကို ၂လ ( ၆ ပတ် ) ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းကြေး – ၅ သောင်း
စာအုပ်ကြေ – ၁သောင်း
Level –2(Elementary 2)
Day – တနင်္လာနှင့် ဗုဒ္ဓဟူး
Time – 5:00 – 7:00 PM
Date – 9.8.2021 – 15.9.2021
အသေးစိပ် သိလိုရာများကို – chat box /comment မှသော်လည်းကောင်း
: 09954422122 / 09441145890
: enquiry@lapg.info မှတဆင့် ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
Young Learner Special English Course Level – 1 (Elementary 1)